Kurapa kweaphasia: phonological vs semantic cue - Kudzidziswa kwekuziva
Kurapa kweaphasia: phonological VS semantic cue
Usati watanga. Kana iwe uri nyanzvi inofarira kurapwa kweaphasia, isu takagadzirira iyo asynchronous vhidhiyo kosi "Mushonga weafasia: anoshanda maturusi" (€ 80). Anopfuura maawa mana ekugadzirisa nezvinhu zvinoteedzera uye kuwana kwehupenyu kune izvo zvirimo.
Hazvisi nyore kutaura marapirwo andinozounzwa mabhenefiti akakura emunhu ane aphasia. Akaedza kupindura mubvunzo Yael Neumann (2018) 
Chinangwa chechidzidzo ichi ndechekujekesa kana phonological uye semantic therapy inokanganisa mhedzisiro yacho zvakasiyana kune vanhu vane mhando dzakasiyana dzeaphasia. Vatori vechikamu vakave neyakaenzana Semantic Feature Kuongorora (SFA) uye Phonological Components Kuongorora (PCA).
Mhedzisiro yacho yakaratidza akasiyana mhedzisiro kubva kumurwere kusvika kune murwere. Pakati pezvinhu zvinoita sekunge zvakakonzera mhedzisiro yekurapa, kuwanda kwezvakakanganisika, marongero ayo murwere wega aigamuchira kurapwa, uye miganho yemurwere pachezvake inoita kunge ine basa rakakosha.
Iyo yekuenzanisira sampuro yechidzidzo ichi inoumbwa nevatori vechikamu vana vane makore ari pakati pemakumi matatu nemasere nemakore makumi matanhatu (varume vatatu nemukadzi mumwechete) zvinoenderana nezvinotevera maitiro
Unilateral sitiroko yekuruboshwe hemisphere
American Chirungu chizvarwa mutauri
Kuwana kanenge diploma rechikoro chesekondari
Mushure mekurohwa, huvepo hweaphasia hunowanikwa matambudziko eexical
Kusavapo kwecomorbid neurological pathologies iyo inokanganisa maitiro ekuziva.
Uyezve, nzira mbiri idzi, dzese semantic uye phonological, dzakaenzana maererano nekuoma uye kurongeka. Kaviri pasvondo, mazana mashanu nemakumi mashanu nemashanu emadhirowa madema uye machena emazita ekongiri akajairika kubva kuInternational Picture Naming Project (IPNP) yakaratidzwa kune mumwe nemumwe anenge achipinda (Szekely 525 ).
Maitiro ekusarudza mazwi akaomesesa kune mumwe murwere aive akavakirwa pamhando nhatu dzekuita panguva mbiri dzekumutsiridza.
Kupa mhinduro isiriyo kaviri mumutsara
Wakambopa mhinduro isiriyo uye kururamisa
Kungopa mhinduro isiri iyo kamwe uye nemhinduro chaiyo kamwe
Chidzidzo ichi chakanangana nekuongorora mhedzisiro yesemantiki uye phonology yakatarisa kurapwa kwekurapa kwehunyanzvi kunyatso. Iyo data yakapihwa neyekutanga yakabatanidzwa kune matatu mazwi zvinyorwa:
Mashoko ekurapwa kweSFA
Mazwi ekurapwa kwePCA
Rondedzero yemashoko ekurapwa isina kutariswa panzira dzekare
Muchikamu chekutanga, mazwi kubva pane yekutanga runyorwa akadzidziswa uye data pane ese matatu mazita akaunganidzwa. Muchikamu chechipiri mazwi kubva rwechipiri runyorwa akadzidziswa uye data pane ese matatu mazita akaunganidzwa zvakare. Vatori vechikamu vakapihwa zvisina kurongwa kuSFA uye Phase 1. PCA kurapwa. Gare gare, vanogamuchira kurapwa kweSFA vakagamuchira kurapwa kweCAA uye zvinopesana.
Mhedzisiro yacho ine yakasimbisa zvakawanikwa kare nezve mabhenefiti anogona kutorwa kubva kunzira dzese dzekurapa zvine mutsigo pavatatu vevatori vechikamu vana vane hunyoro hwechirevo anomie, zvisinei nemaitiro - phonological kana semantic - yakashandiswa.
Mhedzisiro iyi inoita kunge iri nekuda kwekupindirana kwenzira mbiri idzi kuitira kuti ishandise ese ari maviri masemantic uye lexical kugadzirisa, kunyangwe hazvo chinangwa chechidzidzo chiri chekutarisa pane akasiyana maitiro eimwe nzira. Murwere ane epakati giredhi anomaly, zvisinei, akaratidza kuvandudza chete neyekutanga nzira uye kwete neyechipiri. Nekudaro, miganho inokonzerwa negiravhiti uye kugona zvinoita sekunge zvinoita chinzvimbo chikuru mukutsvaga kwedata.
Zvakare, zvinofungidzirwa kuti ne nekuwedzera kusimba murwere asvika pamugumo yekuvandudza pakupera kwekutanga kurapa kwekurapa, kuitira kuti udzikise mwero wekuvandudza unowanikwa muchikamu chechipiri cherapi. Yekuchengetedza dhata inoitawo kunge inofambiswa nehurongwa hwekurapa uye margins ekuvandudza
Humbowo hwesainzi pane generalization hwaratidza kushanda kukuru:
kune avo vane hunyoro aphasia, zvinopesana neane mwero anomia
kurapwa kwakapihwa kutanga maringe nekurapwa kwakapihwa wechipiri.
Izvi zvinoratidza kuti sekuomarara kweanomie kuri kuwedzera, zviri nyore kusvika pamugumo wekuzadza kwekurapa, nokudaro zvichideredza mukana wekuwedzera nekuwana shanduko mushure mekosi yekutanga yekurapa, zvisinei nekuti ndeye phonological kana semantic.
Chidzidzo chine zvimwe zvausingakwanise: kutanga pane zvese, sampuro idiki uye sezvo ruzivo rwacho ruchibva kune imwe nyaya, mhedzisiro inofanirwa kuverengerwa nekuchenjerera. Zvakare, vatori vechikamu vakanyoreswa pahwaro hweyakaisirwa nzira yega, uye havana kusunganidzwa nekuomarara kweafasia kana hunhu hwakanaka sekukurudzira; iyi sarudzo yakaverengerwa kunyatso kumiririra vanhu vekiriniki, kunyangwe ikatungamira mukusaenzana (3 zvidzidzo zvine hunyoro anomia, imwe ine mwero anomia). Kukamurwa kwakakosha kwakakonzerwa nenyaya yekuti, panguva yekudzidza, vatatu pavarwere vana vakaita mamwe macircuit ekurapa kwekutaura.
 Neumann Y. A kesi nhevedzano yekuenzanisa kwesemantically yakatarisana vs. phonologically yakatarisa cued kutumidza zita mune aphasia. Clin Linguist Phon. 2018; 32 (1): 1-27
 Szekely A, Jacobsen T, D'Amico S, et al. Chitsva chitsva chepamhepo cheongororo dzezvepfungwa. J Mem Lang. 2004;51(2):247-250
Zvinogona zvakare kukufarira
MuAphasia GameCenter iwe unowana zvimwe zviitiko zvekugadzirisa matauriro muvakuru
Chinyorwa: chii aphasia uye chii chingaitwe
Chinyorwa: Kurapa kwekuverenga kunzwisisika muafasia
Chinyorwa: Therapy Therapy ye post-stroke aphasia: inobatsira here?
Chinyorwa: kugadzirisa kugadzirisa kunyora muasiaia uchishandisa… WhatsApp!
Chinyorwa: aphasia - kuvaka kwechirevo
Chinyorwa: aphasia nedhinomine: hunyanzvi uye mhedzisiro zvichienzaniswa
anomie, phonological cue, semantic cue, Kurohwa, aphasia kurapwa
Kurapa kweaphasia: phonological VS semantic cue2021-03-292021-03-31http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/03/hand-982048_640.jpg200px200px
Kutaura murapi Chiara Donadio
Speech Therapist, inobata nekuongorora uye kurapwa kwekusagadzikana kwemitauro uye kudzidza uye kurwara kwenzwi. Akaenda kune yekuzvibata Therapist kosi neABA nzira, iyo Feuerstein PAS Basic I kosi uye PECS ini nhanho kosi. Anoshanda kuTrainingCognitivo studio.
Yakawanikwa phonological dyslexia: chii icho uye chii chinogona kuitwaAphasia, Zvinyorwa
Chisingaperi aphasia: zvirinani nzira yema multimodal?aphasia